Gbasara Anyị - Hangzhou Gravitation Medical Equipment Manufacturer & Supplier
E hiwere Hangzhou Gravitation Medical Equipment Co., Ltd. na 2018, nke dị na mpaghara teknụzụ dị elu nke Hangzhou. Ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na-elekwasị anya na nyocha, mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ ịre ahịa nke usoro ndụ ngwaahịa niile na ngalaba ahụike ezinụlọ.
Site n'ike teknụzụ siri ike, ngwaahịa dị elu na ngwaahịa tozuru oke, yana sistemụ ọrụ zuru oke, anyị enwetala mmepe ngwa ngwa, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ enwetala ma too ya nke ukwuu, wee nweta asambodo nke ngwaahịa dị elu, wee bụrụ ụlọ ọrụ ama ama na ụlọ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere akara nlekọta Dolphin, na-ere ihe karịrị nde $ 50 na China China kwa afọ, ụlọ ọrụ ahụ na-agbasi mbọ ike na-achọ ndị ahịa dị ka etiti, na-agba mbọ inye ndị ahịa echiche ọrụ ịzụ ahịa otu nkwụsị, iji nyere ndị ahịa aka ịrụ ọrụ nke ọma. ụkpụrụ ndụ, site na iwulite isi nke nhazi elu na mgbada, imekọ ihe ọnụ na njikọta ọkọnọ mmeri, yana mmepe na-aga n'ihu nke ihe ọhụrụ teknụzụ + usoro ịre ahịa ahaziri iche, na-akọwa usoro okirikiri na-achịkwa uru ọrụ atọ, mbọ na-aga n'ihu maka ndị ahịa imepụta ahụmịhe ịzụ ahịa kacha mma.
Uru Atọ Atọ a
Ịzụta Otu Kwụsị
karịa ụdị 1000 nke ihe oriri na akụrụngwa ọgwụ na -ejikarị, yana nchekwa data ngwaahịa na -emelite mgbe niile.
ngwaahịa obere ogbe, ngwugwu imewe n'efu yana ibipụta LOGO.
ụbọchị iri na ise kwa ụbọchị, okirikiri mmegharị ụbọchị asaa kachasị ọsọ ọsọ, belata ọnụahịa na nchekwa gị.
Ụlọ ọrụ anyị ugbu a na-emepụta ma na-ebuputa ihe na-eku ume ikuku oxygen, igwe na-eku ume/igwe na-eku ume, onye na-ahụ maka ọrịa, onye nlele B-Ultrasonic, nkpuchi ahụike, uwe mwụda, Covid-19 ngwa ngwa ule, akwa ụlọ ọgwụ, oche oche, enyemaka na-aga ije/mkpisi, temometa n'egedege ihu, Oximeter, atomizer/nebulizer, onye na -ahụ maka nrụgide ọbara, glucometer.
Anyị bụ ndị na-eweta ihe nkwụsị nke ụdị ọgwụ ọ bụla, na-anabata ndụmọdụ gị